Fitsaboana tany ivelany :: Mitantara an’ireo sedra talohan’ ny fandidiana azy i Eric (Fou Hehy) • AoRaha
Fitsaboana tany ivelany Mitantara an’ireo sedra talohan’ ny fandidiana azy i Eric (Fou Hehy)
Tafavoaka tamin’ny hirifirin’ny aretin’ny tsy fahampian’ny fiasan’ny voa, Rakotoarima­nana Eric, ao amin’ny tarika Fou Hehy. Naharitra herintaona ny fitsaboana azy talohan’ny nahatongavana tamin’ny famindràna voa taminy.
Vita ny fandidiana rehetra. Nosoloina ny voa ary natao grefy ny aty. Salama tsara izy, ankehitriny, na mbola marefo aza, araka ny nambarany teny amin’ny Tranombokim-pirenena Ampefiloha, efitrano Rabesahala Gisèle, omaly. Tsy adinon’ity mpanao hatsikana ity ireo tebiteby sy fahasahiranana ary sedra nodiavina niaraka tamin’ny vadiny sy ny zaodahiny, tany ivelany.
Nalaza tany Inde ny famindrana voa “gaboraraka”, eny amin’ny hôpitaly. Noho io tranga io, tsy manaiky intsony ny fanjakana indiana raha tsy ampiakarina fitsarana ny raharaha famindrana voa. “Intelo izahay no niakatra Fitsarana. Ny antony, tsy maintsy nohamafisina teny amin’ny Fitsarana ny fandavan-tena sy ny fahavononan’ny vadiny, izay nandraisana ny voa sy ny zaodahiny tamin’ny fakàna ny aty. Ankoatra ny mpitsara, manatrika io fitsarana io koa ny solotenam-panjakana sy mpitsabo miisa roa ambin’ny folo ”, araka fitantaran’i Eric Fou Hehy.
Niandry ny fandidiana azy foana i Eric Fou hehy, fito volana taorian’ny nandeha­nany tany Inde. Antony telo lehibe no nahatonga izany. Voalohany, i Eric marary aty. Faharoa, diabetika ihany koa izy. Fahatelo, tsy maintsy natao miaraka ny famindrana ny voa sy fanoloana ny aty.
“Vola mitentina 300 000 000 ariary no niatrehana izany rehetra izany, ankoatra ny vola voaangona niaingana teto
an-tanindrazana. Tsy izay ihany, fa maro ny taratasy nilaina kanefa amin’ny Teny anglisy. Tsy nadika tamin’ny Teny malagasy ireny ary nandoavam-bola”, hoy izy mampahatsiahy ny sedra niainany nandritra ny fitsaboana.
Mandalo dingana maromaro ny fitsaboana vao niroso tamin’ny fandidiana. “Nibontsina be ny kiboko. Rano mahatratra roapolo
litatra no tao rehefa navoaka. Vita izay vao natao ny fano­loana ny voa sy aty. Naharitra adiny telopolo no nanaovana ny fandidiana manontolo”, hoy izy.
Tamin’ny 9 jolay taona 2018 no nanainga handeha hitsabo tena tany Inde i Eric Fou Hehy. Salama tsara ny lehilahy, dimy volana taorian’ ny fandidiana natrehiny. Misy ny fitandremana tsy maintsy ataony satria marefo izy. Misy toe-piaina manokana arahiny. Miato amin’ny asa aman-draharahany izay nahalalana azy hatramin’izay aloha i Eric Fou Hehy. “Araka ny toromarika avy amin’ny mpitsabo dia afaka miverina manao ny asa mahazatra ahy hatramin’izay izaho, rehefa afaka herintaona”, hoy izy.
Tsy sasatra mamerina ny fisaorana ho an’ireo rehetra nanampy, na tamin’ny betsaka indrindra na tamin’ny bitika indrindra, ity mpanakanto ity sy ny fianakaviany ary ireo namany akaiky azy. Natao tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy, omaly, ny fotoana nanolorany fisaorana an’ireo nanampy rehetra azy.
Fiainana mpanakanto :: I Bessa sy ny ampahan’ny tantarany ary ny tsiambaratelon’ny mozikany
Fampirantiana an-dalambe :: Nahavariana ny maro ny ranty nasehon’ireo mpaka sary